Midawga Yurub oo Puntlnad kala shiray hirgalinta mashaariic lagu dayactirayo dhismaha wadooyinka. – Radio Daljir
Janaayo 25, 2013 10:17 b 0
Garowe, Janu, 25 ? Wafti ballaaran oo ka socda Midawga Yurub ayaa magaalada Garowe waxay kulan kula qaateen guddoomiyaha hay?ada wadooyinka Puntland ee Nasha Injineer Xassan Cismaan Cali.
Madaxdaan ka socotay Midawga Yurub ayaa hay?adda wadooyinka Puntland ee Nesha waxay kala hadleen dib u hawlgalinta mashruuc lagu dayactirayo wadooyinka Puntland oo hishiiskiisa lawadagalay sanadkii 2011-kii. Waxaana mashruucaasi xilligaasi ballanqaaday inay ka fulinayso deegaannada Puntland Midawga Yurub.
Injineer Xassan Cismaan Cali guddoomiyaha hay?ada dhismaha wadooyinka Puntland ee (NESHA) oo kulanka kaddib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay masuuliyiintu balanqaadeen inay dayactir xooggan ku samaysan-doonaan wadada laamiga ah ee isku xirta magaalooyinka Gaalkacyo iyo Boossaaso.
Kulankaan ay Garowe ku yeesheen madaxdaan ka socotay Midawga Yurub iyo masuulka ugu sareeya hay?ada wadooyinka Puntlnad ee NESHA ayaa kusoo beegmaya xilli ay jirto baahi wayn oo loo qabo dayactirka wadooyinka Puntland, iyo hirgalinta wadooyin hor leh.